Falanqaynta Miisaanka Heesta “Qushuuc” • Oodweynenews.com Oodweyne News
Falanqaynta Miisaanka Heesta “Qushuuc”
News DeskJuly 31, 2020
Dhawr qof oo kala duwan ayaa i soo weydiiyay miisaanka ama godka ay ku socoto heesta cusub ee ‘Qushuuc’, taas oo uu midhaheeda curiyay Cabdirisaaq Xaamud Jaylaani. Runtii heestaasi liiska godadka ii diwaangashan kumay jirin, oo waa ay igu cusbayd. Se markii aan dhuuxay meerisyada heesta waxa ii soo baxay aroorka iyo salka ay ka soo jeeddo.
Sideedaba godadka maansadu ma aha dhudo kala madaxbannaan oo aanu xidhiidh ka dhaxayn, se waa laamo geedka tixda ku wada yaal, oo xidid wadaagga.
Marka loo abtirinayo godadka maansada waxa loo qaybiyaa dirar kala duwan, haddaba heesta Qushuuc waxa ay la bah tahay dirka ‘jiiftada iyo walaalaheed.’ Dirkaas waxa aan u hayay oo liiska iigu jirey 23 god, oo ugu gaaban yahay ‘mooyaha, 4 shaqal’ uguna dheertahay ‘boodaanta, 21 shaqal.’ Laba god oo heestan Qushuuc ka kooban tahay marka lagu daro waxa ay noqonayaan 25 god.
Dhererka: 19 Meeris
Heestu waxay ka kooban tahay 19 meeris. 11 meeris waa isku god, 7 meerisna waa isku god, meeriska soo hadhayna wuu jaban yahay miisaan ahaan. Labada god oo aan lahayn weli magac, waxaynu ku kala calaamadsan doonnaa dhererkooda. Aynu ku summadno god-19 iyo god-17.
God-19, oo ah ka ay heestu u badan tahay, waxa uu la god yahay qasiidada ‘Guullow’ ee Xasan Cilmi, oo aan filayo in sitaad ama hees dhaqameed laga soo dheegtay.
Garannoo adduun waa geeddiyoo, laga guurye
Guulloow Alloow aakhiro na gee, guryo raaxo.
Barbardhig midhaha heesta:
Qalbigaa jacayl u qaboo mid kale, qabanaynin
Mana qoomayn barashada mar qudha, ma qabyaynin
Qofkan aan jeclahay farxadaan ku qabo, ma qiyaasna.
Dherer: 19 shaqal
Habdhac: 2 2 (1) 2 2 2 (1) 2 2 2 (1)
Halbeeg: Hoobeey hobeey hoobeey hobeey, hoobeeyo.
God-19, haddii aynu sii furfurno waa laba qaar hojis iyo hooris. Hojisku waa godkii ‘aloolka’ hooriskuna waa godkii ‘guuguule’.
[Qalbigaa jacayl u qaboo mid kale] + [qabanaynin]
B. Godka Aloolka¹
Dherer: 14 shaqal
Habdhac: 2 2 (1) 2 2 2 (1) 2
Halbeeg: Hoobeey hobeey, hoobeey hobeey
Alla waa xujooy alla waa xujooy
Geel xerada diidaa waa xujooy
Xero kale ka ololaa waa xujooy.
T. Godka Guuguule
Dherer: 5 shaqal
Habdhac: 2 2 (1)
Marka meeris alool ah lagu daro guuguule, waxa inoo soo baxaya god-19
Alla waa xujooy alla waa xujooy + guuguule
Qalbigaa jacayl u qaboo mid kale + qabanaynin
Haddaba, 11-ka meeris ee heesta Qushuuc ee godkan ku arooraa waxa ay kala yihiin:
Qofkan aan jeclahay farxadaan ku qabo, ma qiyaasna
Isma quudhsanoo qabku wuu xunyee, ka qashaafnay
Jacayl qiimaliyo dareen qaayo badan, isu qiranay²
Anigoon qawadin nolol qaybsanoo, u qushuucay
Siday tahay qardhaas wadnahaan ku qoray, qumantayda
Qun u yeelatoo qalanjadu naftii, qandaraastay
Qabsatoo kashaa qayrkeed u jecel, qawlkeeda
Anagoo hal qudha qorshe yeelanoo, qabyo diidnay
Qadaf waa dhacaa kaayaga qaldamay, saxa qaaday.
Meerisyada soo hadhay waxay ku arooraan god-17
Dherer: 17 shaqal
Habdhac: 2 2 (1) 2 2 2 (1) 2 2 (1)
Halbeeg: Hoobeey hobeey hoobeeyo, hoobeeyo.
God-17, haddii aynu sii furfurno isna waa laba qaar hojis iyo hooris. Hojisku waa godkii ‘hagarlaawe’ hooriskuna waa godkii ‘guuguule’. Guuguule waynu soo aragnay, ee hagarlaawe muxuu yahay?
[Igamuu qasaarine dookhu] + [qof san ii xul]
B. Godka hagarlaawe
Dherer: 12 shaqal
Habdhac: 2 2 (1) 2 2 2 (1)
Halbeeg: Hoobeey hobeey hoobeeya
Gaaliyo wixii jeceloow jab
Muslin iyo wixii jeceloow jir
Marka meeris hagarlaawe ah lagu daro meeris guuguule ah, waxa inoo soo baxaya god-17.
Gaaliyo wixii jeceloow jab + guuguule
Haddaba 7-da meeris ee heesta Qushuuc ee godkan ku arooraa waxa ay kala yihiin:
Qofba waa qofkiise qofkaygu, waa qaali
Qudhba waa qudheede qudhiisu, igu qanacsan
Igamuu qasaarine dookhu, qof san ii xul
Qosoliyo kalgacal waqtigayga, kula qaatay
Axdi qara lihiyo balan qoysa, wada qaadnay
Naftu way qirtee quruxdeeda, laysla qaaday
Qacda eegmadiyo arageeda, ku qaboobay
Halka meeris ee soo hadhay, oo miisaan ahaan jaban waa:
Qotonkeeda iyo qaab dhiskeedu, is quweeye
Gunaanadkii, heestani waxa ay ka mid noqon doontaa heesaha horseedka u ah adeegsiga godadka aanay cagtu ku badnayn ee maansada Soomaalida. Cabdirisaaq Jaylaani oo godadkan habaaska ka tumay, isna wuu mahadsan yahay.
1. Aloolka laftiisu wuxuu ka kooban yahay laba meeris oo ‘maqaley’ ah.
2. Meeriskan culays ayaa ku jira, waayo laba farcame oo laga maarmi karayay ayaa galay.
WQ: Cali Ileeye